UNWTO waxay rabtaa WTTC inay guuldareysato: Mexico iyo Dominican Republic waxaa ciyaaray Zurab Pololikashvili
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dalxiiska » UNWTO waxay rabtaa WTTC inay guuldareysato: Mexico iyo Dominican Republic waxaa ciyaaray Zurab Pololikashvili
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dominican Republic • Faallo • Wararka Dowladda • Investments • Wararka Mexico • News • Dadka • Ammaanka • Wararka Spain • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Shirka WTTC Global Summit waxaa loo qorsheeyay inuu isugu keeno hogaamiyaasha waaweyn ee warshadaha safarka magaalada Cancun bisha Abriil 25-27. Dhacdadani waxay hadda tartan ku leedahay Dominican Republic iyada oo ay ugu mahadcelineyso habka cadaawada leh ee xoghayaha guud ee Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO). Kani ma dhammaadka wada-shaqeyntii sida daruuriga ahayd loogu baahnaa ee u dhaxeysay waaxda gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ah ee safarka iyo dalxiiska warshadaha?
Safarka iyo Dalxiiska ayaa qarka u saaran. Malaayiin shaqooyin ah ayaa qatar ku jira Xoghayaha Guud ee UNWTO wuxuu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah WTTC.
Wada shaqeyn deg deg ah oo loo baahan yahay si dalxiiska dib loogu soo celiyo ayaa isku badalay khilaaf uu abuuray hal qof, Xoghayaha Guud ee UNWTO oo sababay in Mexico iyo Dominican Republic ay isku dhacaan.
Xagee buu dalxiis u raacayaa iyadoo ay la socoto Hay'adda UN-ka ee mas'uulka ka ah doonista inay baabi'iso wadahadal si xun loogu baahan yahay oo lala yeesho hoggaamiyeyaasha sare ee hay'adaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawliga ah?
"Zurab ma aha doqon sida adduunku u fikirayay… waa nin xun. Qof xun."
Kuwani waa ereyadii Juergen Steinmetz, aasaasihii Shabakada Dalxiiska Adduunka iyo daabacaha eTurboNews. Qaadacida shaqada WTTC ay qabaneyso, waxay u egtahay dharbaaxo wajiga ugu weeyn ganacsiyada ugu waaweyn ee safarka iyo dalxiiska, xubnaha Golaha Safarka iyo Dalxiiska Adduunka (WTTC).
Gloria Guevara, oo ah agaasimaha guud ee WTTC ayaa tiri: “Xubnahayagu way xanaaqsan yihiin. Xoghayaha guud ee UNWTO, Zurab Pololikashvili, ayaa hada isku dayaya inuu qaadaco xafladaheena. Waan murugsanahay oo waan murugooday. Waqtigani waa waqtigii ay waaxdu u baahan tahay hoggaamiyeyaasha inay si wadajir ah ula shaqeeyaan si aysan u qaadicin. ”
Global Guevara wuxuu u dagaallamayay sida qofna uusan u ilaalin safarka caalamiga ah iyo dalxiiska dalxiiska. Waxay halkaa u joogtay xubnaheeda daqiiqaddi uu faafay faafida.
"Aniga iyo Gloria marwalba isku fikrad maan ka aheyn sida aan ula dagaalami karno dhibaatadan, laakiin waan is ixtiraameynaa," ayuu yiri Juergen. “Qof kasta oo sharaf leh wuu fahmi karaa in horay loo socdo kaliya lagu guuleysan karo in qof walba uu wada shaqeeyo. Xoghayaha guud ee UNWTO wuxuu weydiisanayaa hogaamiyaasha muhiimka ah inay ka soo qeyb galaan munaasabada UNWTO oo la isugu geeyay daqiiqada ugu dambeysa isla maalinta shirkii WTTC uu caayayo kaliya ma ahan WTTC laakiin waa kuwa isku dayaya inay badbaadiyaan warshadani iyo nidaamka Qaramada Midoobay sida dhan. Jamhuuriyadda Dominican-wada-martigelinta dhacdo noocan oo kale ah halkaas oo shirkado badan oo xubin ka ah WTTC ay ganacsi sameeyaan ay aad u gaaban tahay. Dalxiisku waa qayb weyn oo ka mid ah wax soosaarka Dominican Republic, waana inay danta DR ka tahay in la ixtiraamo qof kasta oo ka shaqeynaya hadafka guud si dib loogu soo celiyo warshadani muhiimka ah.
Gloria Guevara ka timid Mexico waa maamulaha guud ee London Travel Travel and Tourism Council (WTTC), oo ah hay'ad ay ku jiraan 200+ xubnood oo ka kooban shirkadaha ugu waawayn aduunka ee safarka iyo dalxiiska Dad badan ayaa leh WTTC waxay matalaysaa waaxda gaarka loo leeyahay ee dalxiiska . Ururka Dalxiiska Adduunka, UNWTO waa Hay'ad Qaramada Midoobay gacansaar la leh waxaana loo maleynayaa inay wakiil ka tahay waaxda dowladda. Zurab Pololikashvili, 44, oo ka socda Jamhuuriyadda Georgia waa Xoghayaha Guud ee UNWTO hadda.
Ilaa dhammaadkii 2017, UNWTO iyo WTTC waxay u shaqeynayeen sidii mataano siamese ah oo adduunka adduunka socdaal iyo dalxiis ku yimid. Tani waxay ku hoos jirtay hoggaanka Dr. Taleb Rifai oo ka yimid Jordan, isagoo ahaa Xoghayihii hore ee UNWTO ka hor inta uusan Pololikashvili la wareegin hoggaanka hay'addan.
Dr. Taleb Rifai iyo David Scowsill
Golaha Socdaalka & Dalxiiska Adduunka waxaa loo arkaa inay tahay hay'ad caalami ah oo ku saabsan tabarucyada dhaqaale iyo bulsho ee Safarka & Dalxiiska. Kahor isbadalka ku yimid hogaaminta UNWTO, Agaasimihii hore ee WTTC, David Scowsill, iyo Dr. Taleb Rifai waxay gacmaha is qabsadeen iyagoo horumarinaya warshadan caalamiga ah ee muhiimka ah.
Waxaas oo dhami way is beddeleen Janaayo 1, 2018, markii Zurab la wareegay. UNWTO waxay noqotay urur xiran oo uu maamulo hal nin oo adeegsanaya hanjabaado, iyo eex si uu u xaqiijiyo booskiisa shaqsi.
Kala jeclaanshaha dhanka soocelinta codbixinta ayaa ahmiyada koowaad la siiyay xitaa markii aduunku bilaabay inuu maro dhibaatada ugu daran abid - COVID-19. Ma jirin hal shir jaraa’id oo warbaahinta aan u hogaansamin loo ogolaaday inay ka soo qeyb galaan ama su’aalo weydiiyaan laga soo bilaabo bishii Janaayo ee 2018. UNWTO waxay bilowday inay u aragto WTTC inay tahay tartame oo aysan u noqonin lamaane. Xogheyihii hore Dr. Taleb Rifai dib dambe looma soo dhaweyn inuu kaqeybgalo munaasabadaha muhiimka ah, sida Golaha guud ee UNWTO. Gloria Guevara looma oggolaan inay ka hadasho dhacdooyinka noocan oo kale ah waxayna fadhiisatay safka ugu dambeeya.
Adduunku wuu joojiyay inuu fiiriyo UNWTO, laakiin yaa kale oo u jeedda dhanka waaxda dowladda :? Zurab waxay qaadacday munaasabadaha sida Suuqa Safarka Adduunka, dhacdooyinka IATA, dhacdooyinka ICAO, iyo kuwa kaloo badan. Isla mar ahaantaana, dadka ka shaqeeya UNWTO waxay ku muujiyeen jahwareerkooda si qarsoodi ah, laakiin iyagu diyaar uma ahan inay si cad u soo bandhigaan hadallo, maadaama ay ka walwalayaan shaqooyinkooda haddii ay yiraahdaan wax aan Xoghayaha Guud jeclaan doonin.
Bishii Janaayo, Zurab waxay suurtogal ka dhigeyn in musharax kale uu helo cadaalad daro doorashada Xoghayaha Guud, isagoo hubiyay inuu sii hayn doono cinwaankan sharafta leh 4 sano oo kale. Bishii Janaayo wuu xaqiray Boqortooyada Baxreyn si uu u helo jidkiisa gaarka ah.
Qof u dhuun daloola UNWTO ayaa u sheegay eTurboNews, "Aad buu u kala qaybsan yahay mar walbana wuu qaadacayaa munaasabadaha iyo dadaalada aan kiisa ahayn."
Gloria Guevara waxay isku dayeysay inay isku soo duubto dhacdadii ugu muhiimsaneyd qeybaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga tan iyo markii uu faafay cudurka. Shirka WTTC Summitnext bisha waxaa loogu talagalay in hogaamiyaasha dalxiiska adduunka ay ku kulmaan waqtiga soo socda Shirka Caalamiga ah ee ka socda Cancun. Waxyaabaha ka soo horjeeda dhammaan khilaafaadka iyo inkasta oo xogta cusub ee COVID-19 ee Mexico iyo sidoo kale mawjada saddexaad ee Coronavirus ee Europe, Brazil iyo Afrika, WTTC waxaa ka go'an inay ka dhigto Shirka Caalamiga ah 2021 dhacdo horumar leh oo mustaqbalka Safarka & Dalxiiska ugu wanaagsan wadada suuragalka ah.
Shirka WTTC ee 20-aad ee heer caalami ah ee aadka loo wada sugayo, waxaa abaabulkiisa iskaashi la leh Dowladda Quintana Roo waxaana lagu qaban doonaa magaalada Cancun, Mexico, laga bilaabo Abriil 25-27, 2021. Waxba looma reebin inay ka dhigto dhacdadan mid ammaan ah oo waxtar u leh kuwa ka qayb galaya jir ahaan ama shiid ahaanba.
Sarkaal ka tirsan dowladda Mexico ayaa u sheegay an eTurboNews Ilo wareedyo in dalku ka xumaaday UNWTO iyo Dominican Republic sababo la xiriira dhacdadan aadka loo wada sugayo ee Cancun.
Waa tan sida fiasco dhan u bilaabmay.
Bishii la soo dhaafay iyada oo calaamad u ah kalsoonida dalxiiska Dominican, Xoghayaha Guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili wuxuu dalxiis kula joogay Dominican Republic qoyskiisa.
Si uu ugu beddelo fasaxiisa hawl loo dhan yahay oo ay u badan tahay in lagu bixiyo mushahar, wuxuu qaatay fursad uu kula soo booqdo Madaxweynaha DR Luis Abinader maalintii u dambaysay ee nasashada. Wuxuu u sheegay wasiirka dalxiiska David Collado, in Dominican Republic ay tahay meel amaan ah oo la booqan karo, isagoo sheegay in Dominican Republic ay tusaale u tahay aduunka sida dalxiiska loogu maareyn karo borotokoollo xilkas ah waqtiga COVID-19 oo maareynaya soo jiidashada caalamiga dalxiisayaasha leh amniga caafimaadka.
HE Wasiirka Dalxiiska Dominican Republic David Collado, iyo UNWTO Sec Gen Zurab Pololikashvili
Waxay u badan tahay inay lacag ku shubaan raalli ahaanshaha la isku raacay ee Xoghayaha Guud, Wasaaradda Dalxiiska ee Dominican Republic waxay warqad u dirtay Wasiirada Dalxiiska iyo hoggaamiyeyaasha warshadaha ee Ameerika, oo ay ku jirto Mareykanka shalay.
Warqadda ayaa u qornayd:
Waxaan ku faraxsanahay in aan u soo diro casuumaad halkan ku lifaaqan Xoghayaha Guud ee UNWTO, Mudane Zurab Pololikashvili, iyo Wasiirka Dalxiiska ee Dominican Republic, Mudane David Collado, si ay uga soo qayb galaan kulanka Wasiirada Dalxiiska America, si ay u noqdaan lagu qabtay 26 ilaa 28 Abriil 2021 magaalada Punta Cana, Dominican Republic.
Waaxda Gobolka ee Ameerika
Maanta sarkaal dowladeed oo ka tirsan Dominican Republic ayaa difaacay casuumaada isagoo sheegay in ay leeyihiin taariikh kale oo ka duwan kulankoodii ay ku heshiiyeen intii lagu guda jiray fasaxii qoyska ee Zurab. Waxay ahayd Zurab Pololikashvili oo asbuucii lasoo dhaafay codsaday in loo beddelo taariikhaha kulanka isla taariikhaha kulanka WTTC uu dhici doono.
Waxay hadda siinaysaa xulasho si loo arko cidda la socota UNWTO iyo cidda la socota WTTC. Waa xulasho qadhaadh iyadoo la ogyahay dalxiisku inuu yahay mid ka mid ah qaybaha ugu xun ee saameynta ku yeeshay dhibaatadan adduunka. Hogaamiyaasha dalxiiska ayaa laga yaabaa inaysan mar dambe wada joogin.